Instructional Coordinators Job Description / အခန်းကဏ္ဍနှင့် Duty နမူနာ – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / Instructional Coordinators Job Description / အခန်းကဏ္ဍနှင့် Duty နမူနာ
Instructional Coordinators Job Description / အခန်းကဏ္ဍနှင့် Duty နမူနာ
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized 1 မှတ်ချက် 553 views
Carryout or take part in workshops, ကော်မတီများ, and conferences made to encourage the rational, societal, and actual welfare of students.
Advise, ရယူ, or approve buy of visual aids, ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, devices များ, and instructional components designed to meet district expectations and student instructional desires.
လေ့လာချက်, prepare recommendations on educational strategies, သင်ရိုးညွှန်းတမ်း, and materials regarding faculty programs, and assess.
Build surveys, စစ်ဆေးမှုများ, and procedures that measure the usefulness of curricula and utilize these methods to determine whether plan ambitions are increasingly being satisfied.
Prepare or agree guides, ညွှန်ကြားချက်, and studies to college districts on express academic policies and practices for circulation.
လက်ရှိပြောနေကြသည်အခွားအဘယျရှေးရှေးမှမြေတပြင်လုံးအာရုံစူးစိုက်မှုတက်ကြွ-နားထောင်ခြင်း-ကမ်းလှမ်း, သင်ဖန်တီးထားသောခံရသည့်အမှုအရာနားလည်ရန်အချိန်ယူ, သင့်လျော်သောအဖြစ်မေးမြန်းမေးမြန်းချက်, မှားဖြစ်ကြောင်းအချိန်လေးမှာလမ်းပြနေဘယ်တော့မှ.
Checking-MonitoringANDDiscovering performance of agencies, အခြားလူများ, or yourself take remedial action or to produce improvements.
installation-ထည့်သွင်းခြင်း devices များ, devices များ, ဝါယာကြိုး, သတ်မှတ်ချက်များကျေနပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အစီအစဉ်များ.
Quality Control Research-Performing examinations and testing of products, ကုမ္ပဏီများမှ, စွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စစ်ကြောစီရင်တော်မူရန်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို.
Systems Analysis-Deciding how alterations in the environment, စစ်ဆင်ရေး, and conditions will affect benefits and howatechnique should operate.
Management of Financial Resources-Determining how income will be expended to get the work done, နှင့်စာရင်းကိုင်သည်ဤအခကြေးငွေနှင့် ပတ်သက်..
Operations of Substance Assets-Acquiring and observing for the suitable utilization of supplies, အင်္ဂါရပ်များ, and devices needed to do specific work.
ဝန်ထမ်းများအရင်းအမြစ်များ-ရယူ၏စီမံခန့်ခွဲမှု, ဖှယျ, သူတို့လုပ်ဆောင်အဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်များ directing, distinguishing the top people for that occupation.
ကျော်လွန် 10 နှစ်ပေါင်း
ဇွဲ – 93.10%
စီမံကိန်း – 94.01%
စီမံခန့်ခွဲမှု – 93.95%
ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး – 94.68%
အခြားသူများအဘို့စိုးရိမ်ပူပန်မှု – 94.63%
လူမှု Direction အဖွဲ့ – 94.60%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 93.80%
စိတ်ဖိစီးမှု Threshold – 94.59%
ယုံကြည်စိတ်ချ – 94.37%
ရှုထောင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက် – 94.32%
ကျင့်ဝတ် – 94.33%
လွတ်လပ်ရေး – 93.30%
တီထွင်မှု – 91.67%
analytical အတွေးအခေါ် – 90.13%
Pingback: Tips To Get Jobs In Advertising – veg-နက်နဲသောအရာ